IQOQO LECOLOURPOP'S DISNEY PRINCESS MAKEUP YIMAGICAL BRIDESMAID GIFT IDEA - IINDABA ZOMTSHATO
Eyona Iindaba Zomtshato Iqoqo leColourPop's Disney Princess Makeup yiMagical Bridesmaid Gift Idea
Iqoqo leColourPop's Disney Princess Makeup yiMagical Bridesmaid Gift Idea
Ngu: Knot 09/19/2018 kwi-4: 01 PM
Bamba iitaaras zakho kuba iColourPop isandula ukubhengeza ingqokelela entsha esekwe kwiikhosazana zakho ozithandayo zeDisney.
Ibrand makeup, eqokelele inkolo elandelayo kwiimveliso zayo ezinokufikeleleka-kodwa ezinokuthenjwa, ityhila ingqokelela yayo ezayo yoMyili weDisney kule veki- kwaye uya kufuna ukumakisha iikhalenda zakho ngoSeptemba 28.
Ingqokelela ezayo iphefumlelwe ziiNkosazana zeDisney (iTiana, iPrincess Jasmine, iSnow White, iAriyeli, iBhele kunye neCinderella), kwaye ibandakanya uluhlu lwee-makeups ezivela kwiiphalethi zethunzi zamehlo ukuya kwiiglossti zomlomo kunye nelipstick, nkqu nokuqaqamba.
Imveliso nganye eqokelelweyo yesiqwenga se-19 ibizwa ngegama lengoma yeDisney okanye uphawu lomfanekiso. Ukupakishwa kukwagqibelele ngokwembono ye-nostalgia, kwaye ngokuqinisekileyo iya kuba yinto ebalulekileyo phakathi kweentombi zakho ezithandekayo zeDisney.
Uluhlu lwamaxabiso lusengqiqweni, ukuqala kwi- $ 5 yeepakethe zethunzi zamehlo ukuya kwi- $ 120 kuyo yonke ingqokelela. Iimveliso ziya kubetha ColourPop.com NgoSeptemba 28.
I-Disney inikezele ngoonobumba bayo bakudala kwezinye intsebenziswano eziphambili kutshanje, kubandakanya umgca weSugarfina, enye ingqokelela kunye noKate Spade kunye nokunye.
Isuti engwevu izihlangu ezimdaka ngebala yintoni ihempe yombala
izimvo zesipho seValentine kubayeni
izimvo zothando ngesithandwa sakho
ilokhwe yomtshato ehlazileyo iyathengiswa